GHK အကြောင်း | ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း
Presentation ပီ 2016
ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ၁၂ ၊ ၁၂ ၊ ၂၀၁၂ တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့တွင် ရုံးချုပ်တည်ရှိပါသည်။ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် နေပြည်တော်မြို့ကြီးများတွင်လည်း ရုံးခွဲထားရှိထားပါသည်။
ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် လမ်း၊ တံတား၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေး အခြေခံအဆောက်အအုံကြီးများနှင့် အထွေထွေအဆောက်အအုံကြီးများ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ကိုယ်ပိုင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစနစ်ဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းနှင့် အစိုးရကိုယ်စားပြုအဖွဲ့အစည်းတို့ထံမှ လုပ်ငန်းများကိုလည်း ကန်ထရိုက် သို့မဟုတ် လက်ခွဲကန်ထရိုက်စနစ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း သတ်မှတ်ဈေးနှုန်း သို့မဟုတ် ညှိနှိုင်း သတ်မှတ်ဈေးနှုန်းတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ထို့ပြင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန် အရည်အသွေးပြည့်ဝပြီး စံချိန်မီသည့် ခွဲကျောက် ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့် အသင့်ဖျော် ကွန်ကရစ် ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
ပင်မကန်ထရိုက်တာ၊ လက်ခွဲကန်ထရိုက်တာနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဝေါဟာရတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ အဓိပ္ပါယ် များကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။
စီမံကိန်း လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ထံမှ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း များကို မိမိတောင်းဆိုလိုသော သတ်မှတ်ဈေးနှုန်း (bidding) နှင့် ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်သည့်ဈေးနှုန်း (negotiation) တို့ဖြင့် ပင်မကန်ထရိုက်တာအဖြစ် ကုမ္ပဏီ မှတိုက်ရိုက်လက်ခံဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် မိမိ၏ အမည်နှင့် အဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းမည်။ အထူးကျွမ်းကျင်မှုရှိသော နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများနှင့် ဖက်စပ်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သော အကြီးစား စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် မိမိကုမ္ပဏီများနှင့် အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တောင်းဆိုချက်များကို စီမံကိန်း လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်၏ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်မည်။ ဤသို့သော သဘောဆောင်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန်လက်ခံရာတွင် မိမိကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် တည် ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို မိမိကုမ္ပဏီကသာ ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ရန် မဟုတ်ဘဲ လုပ်ငန်း၏ အစိတ် အပိုင်းအချို့အား လက်ခွဲကန်ထရိုက် ပေးဆောင်ရွက်မည်။ ဤနေရာတွင် လက်ခွဲကန်ထရိုက်တာ၏ ယခင် က လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ဖြစ်ပြီး တစ်ဦးတစ် ယောက်တည်းကိုသာ လက်ခွဲကန်ထရိုက်တာအဖြစ် အားထားခြင်း၊ ချဉ်းကပ်ဆောက်ရွက်ခြင်းမျိုး မဖြစ် စေရပါ။
စီမံကိန်း လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များမှ တိုက်ရိုက်ချပေးလာသော လုပ်ငန်းများရရှိထားသည့် အခြားကန်ထရိုက်တာ များထံမှ လုပ်ငန်းများကို မိမိကုမ္ပဏီမှ ဆောင်ရွက်ရန်လက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသဘောသဘာဝရှိသော လုပ်ငန်းမျိုးသည် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် ထိန်းချုပ်မှုမြောက်မြားစွာနှင့်တည်ဆောက်ထားသည့် ထုတ် လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် များစွာဆက်နွယ်နေရာ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများမှ စက်ကြီးများကို ဆောင်ရွက် အသုံးပြုလေ့ရှိပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံနှင့် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်အမျိုးမျိုးရှိသော ဆောက် လုပ်ရေးကန်ထရိုက်တာများ လိုအပ်သောလုပ်ငန်းမျိုးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ပင်မကန်ထရိုက်တာတစ်ဦးအနေ ဖြင့် အဆင့်ဆင့်သော လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လုံလောက်သော ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အမျိုးမျိုးသော လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များ မရှိနိုင်ပါ။ ဤဖြစ်ရပ်မျိုးတွင် ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေတောင့် တင်းပြီး နာမည်ကျော်ကြားသည့် ပင်မကန်ထရိုက်တာများထံမှ လက်ခွဲကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက် ရန် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းအနေဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏စွမ်းဆောင်ရည် လုံလောက်ခြင်းရှိ မရှိကို စဉ်းစားပြီးမှ လက်ခံ မည်။ ဤနေရာတွင် မိမိကုမ္ပဏီအား အထူးသဖြင့် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း၊ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနှင့် စီမံခန့် ခွဲမှုစနစ်များ စသည့် နည်းပညာများ လွှဲပြောင်းရယူနိုင်ခွင့် ရရှိစေရန်နှင့် အနာဂတ်တွင် ပိုမိုတိုးတက်သည့် နည်းပညာများလိုအပ်သော အကြီးစား စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းစွမ်း ဆောင်ရည် လုံလုံလောက်လောက်ရှိသော လုပ်ငန်းအသိုင်း အဝိုင်းများ ဖန်တီးလုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုခွင့်ပြုပေး ရန်ဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုသည်မှာ အနာဂတ်တွင် အကျိုးအမြတ်များ ဖြစ်ထွန်းစေရန် မျှော်ကိုး၍ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင် ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုကို ဆိုသည်။ စီးပွားရေးဘာသာစကားဖြင့် ဆိုရလျှင် ယနေ့တွင် တန်ဖိုးမများသော် လည်း အနာဂတ်တွင် တန်ဖိုးတက်လာနိုင်ခြင်းကြောင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုကို ဆိုသည်။ ဘဏ္ဍာရေးဝေါဟာရဖြင့်မူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဆိုသည်မှာ အနာဂတ်တွင် ပိုမိုများပြားသော ဝင်ကိုကို ပံ့ပိုး ပေးနိုင်မည့် သို့မဟုတ် တန်ဖိုးကြီးစွာ ပြန်လည်ရောင်းထုတ်နိုင်မည့် ပစ္စည်းကို ဝယ်ယူထားခြင်းကို ဆိုသည်။
အချုပ်အားဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း ဆိုသည်မှာ အနာဂတ်ကာလတွင် ဝင်ငွေများကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ ယင်းမှာ ဝင်ငွေပိုမိုတိုးပွားရေးကို ရည်ရွယ်ပြီး ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ရပ်နှင့် လှုပ်ရှားမှုများ၊ ဝင်ငွေပိုမိုရရှိရေးအတွက် အသိပညာ စူးစမ်းရှာဖွေမှုများ ပါဝင်သည်။ ငွေချေး စာချုပ်ဝယ်ယူခြင်း၊ အိမ် ခြံ မြေများ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားခြင်း၊ စတော့ရှယ်ယာများ ဝယ်ယူထားခြင်းများလည်း ပါဝင်သည်။ ထို့ပြင် ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုခုကို ထုတ်လုပ်ရန် အဆောက်အအုံများကို တည်ဆောက်ခြင်းသည်လည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပင်ဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတိုင်းတွင် အရင်းအနှီးပမာဏနှင့်အမျှ ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်နိုင်ခြေ အနည်းနှင့်အများ ရှိကြသည်သာဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ် ကြုံဆုံနိုင်ဖွယ် နည်းသထက် နည်းရလေအောင် အဖက်ဖက်မှ စူးစမ်းလေ့လာပြီးသကာလ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများကို နှိုင်းချင့် ချိန်ဆပြီး ဆိုးကျိုးထက် ကောင်းကျိုးများမှသာ၊ တစ်နည်းအားဖြင့် အရှုံးထက် အမြတ်များမှသာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုသင့်ပါသည်။
ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ ကိုယ်ပိုင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းမှာ နမ့်ပေါ် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှုအဆင့်ဆင့်ကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ကောင်းမွန်သောအသင်းအဖွဲ့ အုပ်ချုပ်မှု အမူ အကျင့်များကို ကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့် ဒါရိုက်တာများ၏ ပွင့်လင်းမြင် သာစွာ ဆောင်ရွက်မှုနှင့် အစုရှယ်ယာရှင်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် သက်ဆိုင်သူများအားလုံးကို ယုံကြည်စိတ်ချမှု တိုးတက်လာစေရန် အဓိကရည်ရွယ်ထားသည်။ ထိုသို့သော ကောင်းမွန်သည့် အသင်းအဖွဲ့ အုပ်ချုပ်မှ အမူအကျင့်ကို အထောက်အကူပြုစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မူဝါဒ စည်းမျဉ်းများကို သတ်မှတ်ရာ၌ အောက်ပါအရေးကြီးသော အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းထားပါသည်။
၁။ အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို တူညီသော အခွင့်အလမ်းများဖြင့် ဆက်ဆံခြင်း။
၂။ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် အစုရှယ်ယာရှင်များအတွက် သင့်လျော်သော အကျိုးအမြတ်ရရှိစေရန်နှင့် အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်စေနိုင်သော ပဋိ ပက္ခများကို တားဆီးရန်အတွက် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို ကျွမ်းကျင် လိမ္မာသော စီမံဆောင်ရွက်မှုများဖြင့် ရေရှည်လုပ်ဆောင်သွားခြင်း၊ ကုမ္ပဏီမှ ချမှတ်ထားသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် တာဝန်ယူခြင်း။
၃။ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိသည့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအား လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးအတွက် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်းနှင့် ပြည့် စုံလုံလောက်သော သတင်းအချက် အလက်များကို တင်ပြခြင်း။
၄။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများတွင် ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည် များကို သင့်လျော်သော ထိန်းချုပ်မှုနည်းများနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုများဖြင့် ကိုင်တွယ်နိုင်ရန် အစဉ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားခြင်း။ အစုရှယ်ယာရှင် များ အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို မှန်ကန်စွာ၊ ပြည့်စုံ လုံလောက်စွာ၊ မြန်ဆန်စွာနှင့် တန်းတူညီမျှစွာ သိရှိစေရမည်။ အစုရှယ်ယာရှင်များအား ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း၊ မှတ်ချက်ပေးခြင်း၊ အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနှင့် မေးခွန်းမေးမြန်းခြင်းများအတွက် တူညီသောအခွင့် အလမ်းများရရှိ စေရန် ကုမ္ပဏီမှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားသည်။
သဘာဝဝန်းကျင်နှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအပေါ် ကျေးဇူးတင်ရှိသော အားဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်ချက်များသည် လူမှုဘဝ အရည်အသွေး မြှင့်တင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် အစဉ်အမြဲ ဦးတည် အလေးပေးထားပါသည်။
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံး၏ စီမံခန့်ခွဲမှုကို အောင်မြင်မှု လမ်းကြောင်းသို့ ရောက်ရှိစေနိုင်သော ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း နည်းပညာ ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ယှဉ်ပြိုင် လုပ်ကိုင်ရသည့် လုပ်ငန်းသဘော သဘာဝများကို အမီလိုက် နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်သည်။
ကုမ္ပဏီသည် ဝန်ထမ်းများကို စီမံအုပ်ချုပ်ရာ၌ ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်း ဆောင်နိုင်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှု၊ သင်ယူလေ့လာမှု၊ ပိုမိုကောင်းမွန်တိုးတက် စေရန် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်သော အသိဉာဏ်ရရှိ စေမှု၊ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားနှင့် အရည်အချင်းမြှင့်တင်ပေးမှုတို့ဖြင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန် စီစဉ်ထားရှိပါသည်။
ဒါရိုက်တာများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင် ဝန်ထမ်းများသည် ၎င်းတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ကြောင်းကျိုးဆီလျော်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ကုမ္ပဏီ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများက လမ်းညွှန်ပေးမည်။ ဝန်ထမ်း များသည် ကုမ္ပဏီ၏ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိခြင်း၊ ရိုးသား ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်တတ်ခြင်းတို့အပြင် အစုရှယ်ယာ ရှင်များ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများအားလုံး အပေါ် တာဝန်ယူတတ်ခြင်းတို့ဖြင့် စည်းကမ်းဥပဒေနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ထားသည်။
တစ်မျိုးသားလုံးနှင့် စက်မှုဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍများ တိုးတက်လာ သည်နှင့်အမျှ နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ ပိုမိုလိုအပ်လာကြသည်။
ဈေးကွက်ကြီးထွားလာမှုနှင့်အတူ လုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဝန်ထမ်း များ၊ စက်ပစ္စည်းများ၊ ယာဉ်များနှင့် ယန္တရားများကို ကုမ္ပဏီမှ ထည့် သွင်းစဉ်းစားထားပါသည်။
ကုမ္ပဏီ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောစီမံကိန်းများတွင် ဆောက်လုပ်ရေး နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အရည်အသွေးကို အလေးထားခြင်း၊ လုပ်ငန်း အပ်နှံသူများအား ဝန်ဆောင်မှုပေးရာတွင် တာဝန်ယူနိုင်မှုရှိခြင်းဖြင့် ရရှိလာသော အတွေ့အကြုံများက အစိုးရနှင့် သက်ဆိုင်သောစီမံကိန်း လုပ်ငန်း အများအပြားကို လုပ်ဆောင်ခွင့် ရရှိစေသည်။
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်ရှိ ဝန်ထမ်းများ၊ ကြီးကြပ်ရေးမှူးများ အပါအဝင် လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီများ၊ ပြိုင်ဘက်များ၊ မြီရှင်များ၊ အစိုးရ နှင့်
အခြားသော ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူများစသည့် ကုမ္ပဏီအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုရှိသည့် အုပ်စုများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကုမ္ပဏီမှ နားလည်ထားပြီးဖြစ်သည်။
၎င်းစိတ်ဝင်စားသူများအုပ်စုသည် ကုမ္ပဏီ ရေရှည်အောင်မြင်ရေး အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းနှင့် အကျိုးအမြတ်များကို အထောက်အကူ ပေးကြောင်းလည်း နားလည်ထားပြီးဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းအဖြစ် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကို အစိုးရကိုယ် စားလှယ်ရုံးများ၊ နိုင်ငံတော်လုပ်ငန်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် အဆောက် အအုံများအတွက် ပင်မကန်ထရိုက်တာ သို့မဟုတ် လက်ခွဲကန်ထရိုက် တာအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်သည်။ အခြားနိုင်ငံမှ ကန်ထရိုက်တာများ နှင့် ပူးပေါင်းခြင်းအားဖြင့်လည်း ဆောင်ရွက်သည်။
လုပ်ငန်း၏ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို လေးစားခြင်းဟူသည့် အပြန် အလှန်သဘောတူညီချက်အရ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တစ်ဦးချင်းစီ၏ အကျိုးအမြတ် သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးမှုတိုင်းတွင် တာဝန်ယူရပါမည်။
ကုမ္ပဏီသည် လမ်း၊ တံတား၊ ကားလမ်းမကြီးများနှင့် အဆောက်အအုံ များ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံများစသည့် အခြေခံ အဆောက်အအုံများအတွက် တည်ဆောက်ခြင်း အင်ဂျင်နီယာပညာတွင် အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူ ကျွမ်းကျင်မှုများ ရှိပါသည်။
ကုမ္ပဏီ၏မူဝါဒတွင် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် လုပ်ငန်းအရည်အသွေးအပေါ် စိတ်ကျေနပ်မှု ရရှိစေခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ၏ အကျိုးအမြတ်နှင့် လိုအပ်ချက်များ ကိုက်ညီစေရေးအတွက် လုပ်ငန်း၏လုံခြုံမှုနှင့် လုံ လောက်ထိရောက်မှုရစေသော ပူးပေါင်းကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းနှင့် နည်းပညာ တိုးမြှင့်ခြင်းကို အားပေးသည်။
ကုမ္ပဏီသည် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူအား ဂရုစိုက်မှုပြုခြင်း၊ လုပ်ငန်းအပ်နှံ သူများနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို မပေါက် ကြားစေရန် ထိန်းသိမ်းပေးခြင်းနှင့် အလုပ်များကို အချိန်တိကျစွာ သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ချိန်ထက် စောလျင်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း တို့ဖြင့် ပံ့ပိုးပေးသည်။
ကုမ္ပဏီအမည် : ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ရုံးချုပ် : ကလ-၁၅၊ ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး၊ ကောင်းမူးလွယ်ရပ်ကွက်၊ မူဆယ်မြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ။
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား : အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၊ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းများနှင့်အတူ ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်း၊ တစ်ဆင့်ကန်ထရိုက် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ အကျိုးတူပူးပေါင်း လုပ်ဆာင်ခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အရည်အသွေး ပြည့်မီသည့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်း။
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ် : ၃၀၁၀/၂၀၁၂-၂၀၁၃ (ရက်စွဲ - ၂၂ အောက်တိုဘာလ ၂၀၁၂)
လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်ခွင့်လက်မှတ် : ၁၃/၂၀၁၂-၂၀၁၃ (ရက်စွဲ- ၁၈ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၂)
မှတ်ပုံတင်ထားသောမတည်ငွေရင်း : ကျပ် ၅,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀
အုပ်စု(က) : ကျပ် ၃,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀
အုပ်စု(ခ) : ကျပ် ၂,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀
ရှယ်ယာတစ်ခု၏တန်ဖိုး : ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀
ထုတ်ပြီးသောအစုရှယ်ယာပေါင်း : ၅၄,၅၁၈ ရှယ်ယာ
ပေးသွင်းပြီးသောမတည်ငွေ : ကျပ် ၅,၄၅၁,၈၀၀,၀၀၀
အုပ်စု(က) အစုရှယ်ယာ : ၃၈,၃၂၆ ရှယ်ယာ
အုပ်စု(ခ) အစုရှယ်ယာ : ၁၆,၁၉၂ ရှယ်ယာ
ငွေချေးသက်သေခံလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ : KBZ Stirling Coleman Securities Co., LTD, Strand Square, 2nd Floor, Room 2-15, No. 53, Strand Road, Pabedan Township, Yangon, Myanmar. www.kbzsc.com
ဥပဒေအကြံပေး : ဦးသိန်းရွှေ (B.A., H.G.P., R.L.) ဗဟိုတရားရုံးရှေ့နေ
စာရင်းစစ် : ဦးဇော်ဇော်ဦး (B.Com., C.P.A) P.A No. 638, Placid & Quiet Place Accounting, Auditing & Financial Consultancy အမှတ် ၂၉၅၊ အနော်ရထာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း +95-9-43136145.
ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် ယင်း၏ချမှတ်ထားသည့် စီးပွားလုပ်ငန်းနှင့် အသင်းအဖွဲ့မူဝါဒများ၊ နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း ပြုကျင့်လိုက်နာခြင်း၊ လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်မှုတိုင်းတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုဝန်းကျင်နှင့် ရှယ်ယာရှင်များအပေါ် အဓိကထားပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဖော်ဆောင်ခြင်း၊ ရှယ်ယာရှင်များနှင့်အတူ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ဦးတည်ပြီး စေတနာထက်သန်စွာ ဆောင်ရွက်ခြင်း စသည့် အချက်များကြောင့် လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်မှုတိုင်းတွင် ပြဿနာအကြီးအကျယ် မရှိသလောက် နည်းပါးသည်။
ကုမ္ပဏီ၏ လေးနှစ်နီးပါး အချိန်ကာလအတွင်းတွင် အောက်ပါ စီမံကိန်းများကို အောင်မြင်စွာ ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
မူဆယ် ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန် အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်း၊
မူဆယ် နန်းတော်ဂိတ် လူဝင်မှု စိစစ်ရေးစခန်း၊
မူဆယ် ၁၀၅ မိုင်၊ သစ်သီးကုန်စည်ကွင်း တိုးချဲ့စီမံကိန်း၊
၁၀၅၀ မဂ္ဂါဝပ်ရှိ ရွှေလီ-၃ ရေအားလျှပ်စစ် သံကူကွန်ကရစ် ရေလွှဲရေထုတ်ပြွန်၊
ထို့ပြင် လက်ရှိဖော်ဆောင်လျက်ရှိသည့် စီမံကိန်းများမှာ -